Pastry Chef | Easy Ray ﻿
23.3.2020, Full time , Food & Beverages / Catering
•	Possess leadership quality and initiative.
•	Able to communicate ideas and thoughts across to others.
•	Ability to build Teamwork community.
•	Excellent mechanical and operational aptitude.
•	Higher School Education
•	Age 23 years old above
•	Minimum3–5years of pastry experience
Work location 46, 73,Chan Aye Thar Zan(Chan Aye Thar Zan),Mandalay.
Job posted: 23/3/2020
•	ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး အဖွဲ့အစည်းနှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည် ။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည် ။
•	တစ်လလျှင် နားရက် (၄) ရက် ရရှိမည်။ •	မနက်ဆိုင်း၊ ညဆိုင်း နှစ်ဆိုင်းခွဲ၍ လုပ်ရမည်။
•	Administration လုပ်ငန်းစိန်ခေါ်မှုများကို တာဝန်ယူရန် အမှန်တကယ်စိတ်အား ထက်သန်သူဖြစ်ရမည်။ •	Office Management ကျွမ်းကျင်ပြီး SOPs ရေးဆွဲနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍ အများနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သ� ...
o	Responsible for checking all assets of company. o	Controlling for admin general expenses. o	Organize meetings, special events and trainings o	Maintain current and accurate inventory of technology hardware, software and resources
•	Candidate must have good Microsoft office skill •	Must have good personality & communication skills •	Excellent in Financial Reporting to Management
414 Days, Full time , Food & Beverages / Catering
• ရုပ်ရည်သန့်ပြန့် ရိုးသားကြိုးစားပြီး အလုပ်ကို တာဝန်ကျေပွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ • ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ • ၀န်ဆောင်မှု့ ပေးရမည့်လုပ်ငန်းဖြစ်သဖြင့် စိတ်ရှည်သောသူဖြစ်ရမည်။ • ...
Junior F&B (Bartendar)
•	စားသုံးဖွယ်ရာ များကိုအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု ပေးရန်။ •	ကုမ္ပဏီ၏ စည်းမျှဉ်းစည်းကမ်း များအတိုင်း လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု များကိုလုပ်ဆောင် ရမည်
•	Minimum6months of bakery •	Able to work asaTeam.
Pastry Chef Hotel & Restaurant Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Easy Ray Hotel & Restaurant Jobs Hotel & Restaurant Jobs Food & Beverages / Catering Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Mandalay Region 321 Days
Mandalay Region 376 Days
Shan State 257 Days
Naypyitaw City 305 Days
Mandalay City 325 Days
Ayeyarwady Region 333 Days